Buundada Yavuz Sultan Selim si dhakhso ah ayey u kacaysaa | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulYavuz Sultan Selim Bridge ayaa kor u kacday
31 / 07 / 2014 34 Istanbul, GUUD, Headline, TURKEY
Buundada Yavuz Sultan Selim ayaa si xawli ah kor ugu kacaysa: Wasiirka Elvan, Yavuz Sultan Selim Bridge oo ku yaal dhinaca Aasiya ee ku taal dabaqa sare ee 195,5, mitirrada 198,5 dhinaca Yurub, ayuu yidhi.
Wasiirka Gaadiidka, Badda iyo Isgaarsiinta Lütfi Elvan, Istanbul '3 buundada buundada' waxay noqon doontaa Buundada Yavuz Sultan Selim ee dhinaca Asia oo ku taal mitirka dhererkiisu yahay 195,5 mitir, 198,5 mitir dhinaca Yurub, ayuu yiri.
Wasiirka Elvan, ayaa weriyaha AA ku sheegay hadal uu soo saaray, in taraafikada Istanbul ay saameyn ku yeelanayso taraafikada qaranka iyo kuwa caalamiga ah ee laga qaadi doono Buundada Istanbul Yavuz Sultan Selim ay sii wadi doonaan si dhakhso ah oo ay u shaqeeyaan.
Isagoo sheegay inay doonayaan inay Bridge Bridge ku dhigaan Yavuz Sultan Selim illaa dhamaadka 2015, Elvan wuxuu caddeeyey inay ku hawlan yihiin isbeddello baaxaddan ah.
Isugeynteenna 5 kun ee 110 shaqaalaheena ah ayaa ka shaqeynaya sidii ay kor ugu qaadi lahaayeen mashruucan illaa iyo waqtigii loo ballanqaaday oo ay waddankeenna u keeni doonaan. Waxaan ku jirnaa kalandarka taariikhdeena iyada oo ay jiraan dadaallada ugu sarreeya ee shaqaalaheenna. Waxaan horay u dhamaynay qodida. Dhismooyinkayagu si dhaqso leh ayey kor ugu kacayaan. Ilaa maantadan la joogo, meelaha dhaadheer ee munaaraddu waxay ka heleen mitir 195,5 mitir Aasiya iyo mitirrada 198,5 dhinaca Yurub. Markii la dhammeeyo, 321 wuxuu noqon doonaa buundada ugu dheer ee xayiraadda adduunka oo leh dherer ka badan hal mitir. Qadka cusub ee Istanbul waxaa qaabayn doona Buundada Yavuz Sultan Selim. ”
In lagu dhexgalo Marmaray
Isagoo tilmaamay in lugta tareenka ee Bridge ee Yavuz Sultan Selim Bridge ay muhiimad weyn leedahay, ayuu yidhi Elvan, ile Wadada tareenka ee ka gudbi doonta buundada ayaa u oggolaan doonta gaadiid aan xaddidneyn oo ka yimaada Edirne kuna taga Izmit. Sidan, iyadoo aag ganacsi oo cusub laga dhisi doono woqooyiga Marmara iyo Istanbul, gobolka oo dhan dib ayaa loogu soo noolayn doonaa dhaqaale ahaan. Nidaamkan tareenka waxaa lagu rari doonaa Marmaray iyo Istanbul Metro si ay ugu xiraan garoonka diyaaradaha Atatürk, Sabiha Gökçen iyo garoonka cusub ee Istanbul. ”
Xakamaynta taraafikada basaska dadweynaha